UKUMKANI WAMAKRELE: INTSINGISELO, INKCAZELO, INDIMA NOKUNYE OKUNGAKUMBI
Kweli nqaku uza kuba nakho ukwazi yonke into malunga ukumkani wamakrele, Intsingiselo, inkcazo kunye nokunye okuninzi, ke ndiyakumema ukuba usijoyine ukuze ufumane zonke iinkcukacha malunga nale arcana incinci. Kuya kuba mnandi kakhulu!
1 King wemihlakulo
3.1 UKumkani wamakrele kumgangatho waseSpain
3.2 UKumkani wamakrele Tarot Marseille
4 Ukudityaniswa kukaKumkani weeNkemba
El ukumkani wamakrele tarot, Ithetha ngamandla, ukomelela, isiqu esingenakugungqiswa, kodwa ikwanxulumene nobukrelekrele kunye nokukwazi ukuqonda phakathi kwento enye nenye.
Yi-arcana encinci yeqela lePalo de Espadas (i-elementi yomoya), nangona ifanekisela into yomlilo. Ke ngoko, linekhadi elikabini, lineentetho ezininzi, eziza kuchazwa ngokweenkcukacha zingezantsi.
Kule khadi ungabona indoda evuthiweyo ihleli etroneni, inguKumkani weeNkemba, inomsesane emnweni wakhe kwaye isithsaba sayo singaphezulu komnqwazi awunxibileyo, ngaphandle kwamathandabuzo, umele amandla negunya, ukuqina noxanduva .
Uhleli ngasemva ehonjiswe ngamanani amabhabhathane kunye neecrescent zegolide, kwicala lasekhohlo ngaphezulu kwendlebe yakhe, unokubona ingelosi, ngokungathi iyamxelela ukuba makenze ntoni okanye enze njani.
Esandleni sakhe sokunene uphethe ikrele elintlangothi-mbini kwaye, ngesandla sakhe sasekhohlo, uphethe intonga yobukhosi ngelixa ephumle ethangeni lakhe, ebonisa amandla apheleleyo, ukhuseleko, ebonisa ubulumko bokulawula.
Unxibe isuti eluhlaza okwesibhakabhaka nebomvu enxulunyaniswa nobumoya, amandla, isibindi kunye namandla ommeleyo. Unxibe ikapa ngombala omfusa oqinileyo, ebonisa ukuba unecala lakhe elibuthathaka, elinemfesane kunye nesisa, kodwa kwangaxeshanye, ukrelekrele kakhulu kwaye unengqiqo.
Isibhakabhaka ngasemva, sicacile kwaye sicacile, sityhila ukuba injani ingqondo yakho kunye nokugweba, kugcwele ubukrelekrele kunye nokuzimisela.
Le arcana incinci igcwele ukutolikwa okuninzi, kodwa yonke into iya kuxhomekeka kumntu ocela imbalelwano, nayo imeko ejikelezileyo.
El ukumkani wamakrele tarot Inamandla kakhulu, kuba isixelela malunga nokuziphatha, izimo zengqondo, ubuntu, kunye nendlela isimilo sethu esiziphembelela ngayo izigqibo esizenzayo yonke imihla.
Ikwamele ubukrelekrele, ubulumko, ukuqhelaniswa kunye ityala. Eli khadi lifanekisela ikrele elingayekiyo inkosi, umlwi, akabi lula ukuhanjiswa ziimvakalelo zakhe njengoko esenza izigqibo ngokubhekisele kuxanduva lwakhe.
Inxulunyaniswa nabantu abangoyikiyo ukwenza izigqibo, kwaye amathuba aliqela awaxabisi into yokuba abanye abantu banokuchaphazeleka emva kolu khetho lukhulu. Ke ngoko, isidingo sokuqonda nokuthathela ingqalelo ukwenza izigqibo xa ingqondo inokucaca kweembono kwaye ingaze ihanjiswe ziimvakalelo.
Ngale ndlela, kuya kugqitywa kugwetywe ixabiso elifanelekileyo. Nangona kufuneka sigxininise ukuba inkosi inobukrelekrele obukhulu, isabonisa ubundlobongela, inamandla, inzima, inobundlongondlongo kwaye inesidima. Ke ngoko, umntu kufuneka aqwalasele isimilo kwimeko nganye.
Ileta inokuba nethemba; sigcwele isikhokelo, hayi esichazayo, kodwa sithathele ingqalelo kuyo nayiphi na imeko, ukuze sizinze, kodwa singachaphazeli mntu.
I-arcanum inokukukhokela, ikubonise indlela ethile, inokubonisa ukukhanya kokucaca. Kodwa kwakhona, ileta inokuwuguqula umyalezo wayo ngokuxhomekeke koonobumba abahamba nayo ekusasazeni, ke, kuya kufuneka ulumke kakhulu ngayo, kuba inzima kwaye yomelele kakhulu.
Ukuba ufuna ukuqhubeka nokufunda malunga, kwendawo yokuhlala, Ngena apha.
UKumkani wamakrele kumgangatho waseSpain
El UKumkani wamakrele kumgangatho waseSpain, isibonakalisa njengendoda elumkileyo, enamandla, ekrelekrele kakhulu kwaye egcwele inyathelo. Ibhekisa kumadoda anezikhundla ezibalulekileyo (oosomashishini, iijaji, abaphathi, abanye).
Xa eli khadi libonakala likwimo elungileyo, sinokuqiniseka ukuba liza kusixelela ukuba indlela esifuna ukuyithatha ichanekile na, kuba imele amandla, ukuqina nokucaca, ke ukuba umntu ucinga ukwenza iprojekthi entsha, lixesha kubonisiwe.
Ngale ndlela, intle kakhulu kwaye isixelela ukuba lixesha lokuba umntu abonise italente yakhe, amandla akhe okuphatha iprojekthi, isixelela ngempumelelo kunye nokuqina esiya kuthi sibonise ngabo bonke ubuchule bethu.
Ukuba ibonakala ikwimo yayo eguqulweyo, kufuneka silumke kakhulu ngayo, kuba inokubonisa ukusilela kwezigqibo zethu, kwaye isimeme ukuba sibe nobulumko.
Kubonakalisa kuthi ukuba kungakho iimpikiswano kunye nokungaqondani, ukuba abanye abantu banokusilawula, ukuze siphulukane nokuzimisela kwethu kwiinjongo zethu. Ngesi sizathu, kubalulekile ukuba unxibelelwano luyintsika esisiseko kuzo zonke iintlobo zomsebenzi kunye neeprojekthi esifuna ukuziqala.
Ngale ndlela siya kuthintela nayiphi na imeko engagunyaziswanga ekhokelela ekusileleni, kwaye ke, suka kwiindlela zokuziphatha ezingalawulekiyo ezingenzi nto elungileyo.
UKumkani wamakrele Tarot Marseille
UKumkani wamakrele uboniswa njengendoda eyomeleleyo, ezele ngamandla negunya, olawulayo, ukhohlakele kwaye unobundlobongela, uyakwazi ukuzibamba, ngenxa yoko ukuqonda kwakhe kuyongamela iimvakalelo zakhe.
Ukuba ibonakala ngendlela eyiyo, ibonisa ukuba kufuneka samkele ukuba kukho igunya elingaphezulu kunathi kwaye kufuneka silihloniphe (nokuba ngumgwebi, umkhosi, abanye).
Inxulunyaniswa nembeko yamandla, imigaqo kunye nemithetho, kodwa ukuba ivela ngendlela eguqulweyo, sinokufumana igunya elikhohlakeleyo, elibandayo nelikhohlakeleyo. Eli khadi libuyisiweyo, ngaphandle kwamathandabuzo, lithetha ngokungcatsha umbuso, isenzo esibi, lilizwi elibi kwaye yonke into kufuneka ithathwe ngokuzolileyo nangobulumko.
Ukudityaniswa kukaKumkani weeNkemba
Ukuba sifumana uKumkani wamakrele namanye amakhadi, ukutolika kunokuhluka, ngolu hlobo lulandelayo:
I-King of Spades kunye ne-Ace yeeNgqekembe: ibonisa impumelelo, ubutyebi kunye nempumelelo yeeprojekthi.
UKumkani wamakrele kunye I-Ace yeekomityi: isibonisa sinceda kwimidla, hayi into embi, ukuba usebenzisa ingqondo ngendlela echanekileyo, unokuxhamla.
UKumkani wamakrele kunye Inca yesipeyidi: inxulunyaniswa nempumelelo efunyanwa ngaphandle komzamo omkhulu.
UKumkani we-Spades kunye ne-Ace yeWands: bonisa ingxoxo, iingxaki, zama ukunxibelelana nokusombulula iingxabano ezinokuthintelwa.
I-King of Swords kunye ne-3 yeNdebe: ibalaselisa ukuba siya kuba kwindawo ekhuselekileyo, siya kukhululeka emsebenzini okanye kwiprojekthi enokuba luncedo.
Zininzi ezinye indibaniselwano kunye noKumkani wamakrele, ke ukutolika kwakhe akupheli.